Hatsikana mandritra ny tontolo andro
2010-03-04 @ 22:01 in Ankapobeny
Na dia saiky tsy hiresaka momba ilay atrikasa antsoina hoe teny ifampierana izay hala-tahaka avy amin'ny loabary andasy izay tontosaina ny andron'ny alakamisy 4 sy ny zoma 5 marsa eny amin'ny Tranom-pivoriana iraisam-pirenena Ivato aza ny tena dia tsy tana fa mba hanoratra kely ihany. Zava-nahatsikaiky manko no tsipalotra ka aleo resahina kely!
Ho fanombohana ary dia tsaroana izay sariitatra vahiny tamina gazety vahiny izay, misy mpivady lehibe mijery fahitalavitra maneho endrika tsy faly. Nandeha ny fandaharana ho an'ny ankizy fa tsy miova ny endrik'izy ireo. Nandeha ny fampihomehezana fa vinitra hatrany izy mivady. Fa nandeha amin'izay ny vaovao politika fa nitsikanikany sy tapa-tsinay mihitsy izy mivady. Nihevitra ihany aho tamin'izaho namaky ilay sariitatra nojinery fahakely fa mba adala ihany ireto mpivady mikivanivany amin'ny resaka tokony ho matotra ireto. Nifindran'ny aretin'izy mivady anefa ny tena rehefa nanaraka ilay fandaharana mivantana tamin'ny fahitalavi-pirenena ny alin'ny alakamisy 4 marsa 2010. Fa nisy inona angaha nitranga?
Ny tolakandro aloha tany ampiasana, misy fahitalavitra azo jerena tsara mihitsy ny anay fa matetika no tsy mahafantoka loatra amin'izay mandeha eo noho ny asa atrehina, dia hita ihany fa hay mandeha mivantana amin'ny fahitalavitra ilay atrikasa. Tsy atao tompontrano mihono tokoa ny olona ka aleo hahita. Tsy nisy nety te-hijery azy avokoa ny tao am-piasana aloha, fantatra fa misy mifanohi-kevitra ny mpiara-miasa ka sao mahatohina angaha na hampisy disadisa. Ny alina tonga tato an-trano aho vao nanaraka, izahay manko e! na tsy mankasitraka tsotra izao io hetsika io aza da nanaraka mihitsy hijery izay fizotrany. Hay tena matiantoka ny tena tsy nanaraka azy hatramin'ny voalohany!
Aleo hofintimpintinina avy hatrany ireo tranga mampivadika aty izay hany mba hitan'ny tena (efa hirava ny lanonana amin'io). Voalohany na dia nolazaina aza fa "teny ifampierana" ny anaran'ilay atrikasa dia mbola niadiana hevitra indray ny anarany amin'ny teny frantsay. Tao ireo nanitrikitrika fa mahasolo ny "Conférence Nationale" avy hatrany io ataon-dry zareo io satria fahavorian'olona tsy misy tahaka io intsony, fahavoriana fikambanana sy antoko politika no tena tiany lazaina eo. Misy kosa ny mitsipaka izany tanteraka, dia lany kely teo ny andro. Lasa avy hatrany ny eritreritra hoe izany ve no niadiana hevitra tao nandritra ny tontolo andro?
Ifandrombahana moa ny fitenenana satria mba te-hiteny ifampierana avokoa angaha! Mananga-tanàna izay te-hiteny fa misy mandritra ny ora iray mananga-tanana foana vao mahazo ny fanamafisam-peo, fa misy ihany koa ny nananga-tanana hatrany fa tsy nahazo anjara fitenenana hatramin'ny farany... na tsy reraka aza ranamana nananga-tanana dia tsy nahazo rariny e! Asa hanao ahoana angaha ny hakiviany any am-podiana any? hita amin'ny fahitalavitra izany tantaraiko izany fa tsy hoe nanatrika tany ny tena an! Misy mifamely fantsy ankolaka mihitsy moa ireo mifandimby miteny fa dia anjarany moa izay. Nodradradradraina tamin'ny kabary fanokafana ihany anefa fa tsy misy hoe kely sy ngeza intsony ny antoko politika fa manan-jò (vato iray avy) rehefa hotontosaina ny fifidianana na fandrotsaham-bato.
Misy ihany koa ny hevitra "minisitra" iray izay namoaka karazana soso-kevitra ahiana ho lany hoe raha fidiana ny "Assemblée consituante" dia tsy asiana fitsapa-kevi-bahoaka na referendum intsony satria efa karazany mahasolo tena ny safidim-bahoaka ireo izay tafiditra ao amin'ny "Assemblée Constituante"... iny indray no hafa saingy mampanahy be ihany. Tsy haiko intsony aho na tokony hihomehy na tokony ho tezitra fa tsy nahita tahaka izany indray aho ho'aho. Hapetraka tsy misy fitsapa-kevi-bahoaka intsony ve ny lalam-panorenana? Faramparany moa efa be no lasa satria tsy manana fiara manokana hodiana, tsy ilazako hoe noho ny fahatezerana, dia nikabary nanao fanontaniana maro ny mpitarika iray ka valiana eny na tsia, ary tanatin'ny fanontaniana ny hoe : "ilaina indray ve ny manova ny governemanta?" dia tsia no nataon'ny sisa mpanatrika, mety ho avy amin'iny fanontaniana kabary novaliana am-bava iny izao no ahiako hamoahana ny fehinkevitry ny safidim-bahoaka.
Satria moa ny tena tsy nivonona ny hitadidy na handray an-tsoratra ny zava-nitranga dia noadinoina ny ankamaroan'ny zava-nisy faramparany mba tratra; na izany aza tena noana vetivety mihitsy aho noho ny fotoana naha-tapa-tsinay ahy fotoana lavalava ihany. Koa asa moa ny andron'ny Zoma na hanakory indray ny tohiny na hanakory fa tsara ihany ny mijery mivantana ny raharaha eny Ivato io tsy maka lagy fa vonona ny hihomehy, afa-tsy hoe tsy hampitaina mivantana intsony angaha ny fotoana na hoe maro no tsy hanaiky ho mpilalao mampihomehy ao anatin'ilay atrikasa. Dia aleo hihomehezana ilay politika e! fa na izany na tsy izany mba misy ihany koa ny hevitra matotra hoe raha hanangana "Assemblée Constituante" dia tsy ilaina intsony ny Fikaonandoham- pirenena izay tokony hihevitra momba ny Lalampanorenana ihany koa satria manjary mifanitsak'asa ny roa tonta.
jentilisa, 05 marsa 2010 amin'ny 00:07 maraina Antananarivo